Kenya oo xaqiijisay in saraakil Boolis looga dilay weeraro ka dhacay Mandheera.
Sunday December 05, 2021 - 11:27:57
Taliska booliska dowladda Kenya ayaa faah faahin dheerad ah ka bixiyay weerar is xigxigay oo saacadihii lasoo dhaafay ciidamadooda lagula beegsaday gudaha dhulka Soomaalida NFD ee gummeysiga ku jira.
Dowladda Kenya waxay xaqiijisay in weeraro dhabbagal ah iyo qaraxyo ay ciidamadeedu kala kulmeen dagaalyahannada Jihaadiga Al Shabaab ee ka halgamaya gudaha NFD.
Kenya waxay sheegtay in wadada loo galay gaari xamuul ah oo ku socdaalayay wadada xiriirisa deegaanka Raamo iyo degmada Mandheera, weerarkaas waxaa ku dhintay sarkaal boolis halka 12 kale ay dhaawacyo soo gaareen sida ay xaqiijiyeen askar ka badbaaday weerarka.
Dad goob joogayaal ah waxay sheegeen in ay arkayeen dagaalyahanno aad u hubaysan oo baacsanaya ciidamada booliska Kenya xilligii uu dagaalka culus ka socday gobolka Mandheera.
Gaariga xamuulka ah ee weerarka tooska ah kala kulmay Al Shabaab ayay saraakiisha boolisku sheegeen in uu daabulay ciidamada ku sugan saldhigga Raamu.
Dowladda Kenya waxay sheegaysaa in weerar kale oo looga dilay sarkaal boolis uu ka dhacay deegaanka Fiino ee isla gobolka Mandheera, Rono Bunei oo ah taliyaha booliska gobolka loo bixiyay waqooyi Bari Kenya ayaa sheegay in ay ciidamo xoojin ah udireen deegaannada la weeraray.
Xarakada Al Shabaab oo shalay sheegatay mas'uuliyadda weeraradan ayaa carabaawday in ay dishay askar farabadan islamarkaana ay gubtay ugu yaraan 2 gaari oo ay wateen ciidamada booliska Kenya.
6 sano oo kasoo wareegtay dagaalkii Ceel-Cadde ee lagu laayay ciidamada Kenya [Warbixin].
Maxaan Ka Ognahay Qaraxii Lala Eegtay Saraakiisha Reergalbeedka ee ka Dhacay Muqdisho?